१४ खर्ब ७४ अर्बकाे बजेट, कुन क्षेत्रमा कति विनियाेजन ? | रेडियो झापा 100.7 MHz.
१४ खर्ब ७४ अर्बकाे बजेट, कुन क्षेत्रमा कति विनियाेजन ?
रेडियो झापा 100.7 MHz. शुक्रबार, जेठ १६, २०७७ ६:०९:२८
सरकारले कोरोनाको जोखिमका बेला ‘फ्रण्टलाइन’मा खटिने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने भएको छ । यसका लागि नयाँ आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।